သူတောင်းစားဘ၀မှ လူငယ်များ၏ လမ်းပြကြယ်အဖြစ်သို့ – Pann Satt Lann Books
”မျက်ရည်မခိုင်ရင် …. မဖတ်ပါနဲ့”
အမှောင်တကာ့အမှောင်တွေထဲမှာ ဘဝမှာမပြည့်စုံမှု၊ အမှောင်ကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ ဒုက္ခအရောက် ဆုံး …….. အဲ့ဒီအမှောင်မီးလျံထဲက ဖီးနှစ်ဌက် လိုထပျံရုန်းကြွ ဘဝတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရင်း …..အနာဂတ်အလင်းကို ဖမ်းဆုတ်နိုင်ခဲ့သူ လူတစ်ယောက် အကြောင်း …….
၁၉၉၀ခုနှစ်များဝန်းကျင် …….. ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အလွန်ဆင်းရဲလှတဲ့ လူမိုက်များကျင်လည်ကျက်စားရာ ရပ်ကွက်လေးတစ်ခုမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေး တစ်ဉီးရှိပါတယ်။ အဖေအမေကအရမ်းဆင်းရဲလို့ ဘုန်း ကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းကျန်ဟင်းကျန်တွေကို ကြွပ်ကြွပ် အိပ်လေးတစ်လုံးနဲ့ ထမင်းတွေတောင်းစားပြီး ကျောင်း တက်ခဲ့ရပါတယ်။ ညဘက်စာကျက်ဖို့ ရေနံဆီဖိုးမရှိလို့ လမ်းဘေးကမှိန်ပြပြမီးတိုင်တွေအောက် စာကျက်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်ကလေး …..
ဝတ်စရာအင်္ကျီမရှိ၊ ကျောင်းသွားဖို့အဖြူနဲ့ အစိမ်းကျောင်းဝတ်စုံဆိုတာနတ္တိ ….. ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အဝတ်တစ်စုံကို အရှက်လုံရုံသာဝတ်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့လူငယ်လေးဟာ ….. နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် …. မြောက်ဥက္ကလာ-မင်္ဂလာဒုံငမိုးရိပ်ချောင်းတံတားနားက မကောင်းမှုတွေမှာ မေ့လျော်ခဲ့တဲ့ လူဆိုး လူပေလေးတစ်ဉီးအဖြစ်နဲ့ အမှောင်ထဲကိုတိုးဝင်လာပါတယ်။ အဲ့လိုထမင်း တောင်းစားခဲ့တဲ့၊ ကုန်းကောက်စရာမရှိလောက်အောင် ဆင်းရဲခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က အော့နှလုံးနာခဲ့ရတဲ့လူငယ်လေးဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီးနောက်ယနေ့အခါမှာတော့ … ဘာသာပြန်၊ စကားပြန်၊ အကြီးတန်းသတင်းထောက်၊ လူငယ်စာတတ်တွေမွေးထုတ်ပေးနေသူ၊ အမေ့အိမ်ဘိုးဘွားရိပ်သာကြီးတစ်ခုတည်ထောင်ကာ ဘိုးဘွားများလက်ခံ စောင့်ရှောက်ပေးနေသူထက်ပို၍ မြန်မာပြည်မှာ အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင် စာရေးဆရာတစ်ဉီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် Best Seller စာရင်းဝင် စာရေးဆရာချမ်းငြိမ်း(ဟံသာဝတီ) ၏ ဘဝကောက်ကြောင်းတဇေ့တစောင်းကို ဖတ်ရှုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
5.3 x 0.2 x 8.3 inches
Ind English၊2019 မေလ (တတိယ-ကြိမ်)
“သူတောင်းစားဘ၀မှ လူငယ်များ၏ လမ်းပြကြယ်အဖြစ်သို့” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply